Aza mamono ny fihetseham-po satria malahelo ianao manana olana! (novokarina) - NYE Countdown ho Djs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - #31 Sokajy: DJ Drops
Aza mamono ny fihetseham-po satria malahelo ianao manana olana! (Vokatra)
Fotoana izao ho an'i Taco Bell! (version 2) (novokarina)
Tsy tompon'andraikitra amin'ny vohoka rehetra vokatry ny hariva isika! (Novokarina)
Misaotra anao mivoaka sy mankalaza ny Taom-baovao miaraka aminay. Efa mikatona izahay izao ka hahita anao ao amin'ny White Castle! Aza avela ny FUCK! (Vokatra)
Tongasoa amin'ny Taom-baovao iray ary zava-baovao amin'ny fialambolin'ny alina. Tohizo izany, dia ho fitetezam-boninahitra. (Vokatra)
Ry lahy sy vavy, azonao atao ny maka ny ampongatin'ny olona amin'ny segondra 30 manaraka raha tsy misy olana. (Vokatra)